မော်လိုက်ဆေးရုံကဲ့သို့ ဆရာဝန်တစ်ဦးမျှမရှိခြင်းမျိုးမဖြစ်အောင်မူဝါဒချဆောင်ရွက်မည်ဟု ဒေါ်? - Yangon Media Group
မော်လိုက်ဆေးရုံကဲ့သို့ ဆရာဝန်တစ်ဦးမျှမရှိခြင်းမျိုးမဖြစ်အောင်မူဝါဒချဆောင်ရွက်မည်ဟု ဒေါ်?
စစ်ကိုင်း၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂-မော်လိုက် ဆေးရုံကဲ့သို့ ဆရာဝန်တစ်ဦးမျှရှိ မနေခြင်းမျိုးမဖြစ်အောင် မူဝါဒချလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားလိုက်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၂ရက် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ကလေးမြို့တွင် ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် နှင့်လူထုတွေ့ဆုံပွဲ၌ ပြည်သူတစ်ဦး၏ တင်ပြလာမှုအပေါ် ၄င်းက အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ ခြင်းဖြစ်သည်။အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲတွင် မော်လိုက်မြို့မှ ပြည်သူတစ်ဦးက ၄င်းတို့ မော်လိုက်ဆေးရုံတွင် ဆရာဝန်သုံးဦး ချပေးထားသော်လည်း ဥွ ဆရာဝန်တစ်ဦးမှာ ခွင့်ပြန်သွားကြောင်း၊ ဒုတိယဆရာဝန်မှာလည်း အိန္ဒိယသို့ ပညာတော်သင်ပါသွားသဖြင့် ထွက်သွားကြောင်း၊ နောက်တစ်ဦးမှာလည်း သင်တန်းတစ်ခုတက်ရန် ပြန်သွားကြောင်း၊ ဆရာဝန်သုံးဦး ချပေးထားသော်လည်း တစ်ဦးမျှမရှိတော့ကြောင်း၊ ယင်းအတွက်ကြောင့် ကျန်းမာရေး အတွက်တစ်စုံတစ်ခုဖြစ်လာပါက ကလေးမြို့ရှိ ဆေးရုံသို့လာရောက် ကုသနေရသဖြင့် ဒုက္ခများစွာခံ စားနေရကြောင်း ပြောခဲ့သည်။
အဆိုပါဖြစ်စဉ်မျိုးသည် ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်မက ပညာရေးကဏ္ဍတွင်ပါကြားနေရသည့် အတွက် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာန များမှမူဝါဒချမှတ် လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတော် ၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ပြောသည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်၍ နိုင်ငံ တော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က””ဒါ ကလည်း ကျွန်မတို့စနစ်ရဲ့ အား နည်းချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မနေ့ ကလည်းဆွေးနွေးတာ။ တစ်ယောက် က ဒီမှာစာသင်ဖို့ဆိုပြီး လာပြီး တော့သင်တန်းပို့မလို့ဆိုပြီး မကြာ ခင်လပိုင်းအတွင်း သင်တန်းပို့ လိုက်တယ်။
နောင်ဆိုလို့ရှိရင် မပို့ခင်ကို သေချာစိစစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းသွားစရာရှိတဲ့ သူ၊ ပျက်ကွက်ဖို့ရှိတဲ့သူကို အစက တည်းကမလွှတ်သင့်ဘူး။ သမီးတို့ပြောတာမှန်ပါတယ်။ သက်ဆိုင် ရာဝန်ကြီးဌာနပေါ့။ ပညာရေးမှာလည်း ဒီလိုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ ကြားပါတယ်။ တာဝန်ထမ်းဆောင် ဖို့ဆိုပြီး ဒီနေရာကိုပို့ပြီးမှ နောက် ပိုင်းသင်တန်းတွေတက်ဖို့တို့၊ ဘွဲ့ ယူဖို့တို့ ပြန်သွားတာတွေရှိပါ တယ်။ နောင်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင် မူဝါဒချပြီးတော့ လုပ်ဆောင်သွား မယ်””ဟု ၄င်းကဆိုသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်သည် ချင်းပြည်နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းအတွင်းရှိ မြို့နယ်များ သို့ ယနေ့သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်သူများနှင့် တွေ့ ဆုံကာပြည်သူများ၏ အခက်အခဲ ကိုတိုက်ရိုက်နားထောင်ခွင့်ရသည့် အတွက် အစိုးရတစ်ရပ်အနေဖြင့် တန်ဖိုးရှိသည့် ခရီးစဉ်ဖြစ်ကြောင်း ၄င်းကပြောသည်။
ရန်ကုန် ဘူတာကြီးတွင် အရက်မူးပြီး ခရီးသည်များကို ဆဲဆိုနေသည့် သင်္ကန်းဝတ်ကို လူဝတ်လဲပြီး တရား??
ဧည့်သည်လာမှ လမ်း မပြင်ရန် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် သတိပေး
ကျောက်ထုတ် လုပ်ငန်းများကြောင့် ကျိုက်ထီးရိုးတောင် ပြိုကျမည်ကို ဒေသခံများ စိုးရိမ်နေ
ဆိုးလ်ရှားသည်လည်း ဘတ်စ်ကားဗျူဟာ သုံးနေဆဲဟု ဗန်ဂါးလ်ဝေဖန်၊ ရာသီကြိုကာလတွင် ရှန်ဟိုင်း၌ စပါ
လစ်လပ်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ် စည်ပင်ဝန်ကြီးကို လွှတ်တော် အတည်ပြု
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံရေးလေ့လာမှု ပညာမဟာဘွဲ့ သင်တန်းကို မန္တလေး တက္ကသိုလ်တွင် ?